ချစ်ညီမ သို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » ချစ်ညီမ သို့
Posted by မြစပဲရိုး on Jun 17, 2015 in Think Tank | 29 comments
ကိုမျိုး ရေးထားခဲ့ ကဗျာ လေးထဲ က စာလုံးကို ယူပြီး ပို့စ် တစ်ခု ရလိုက်သလို
ညီမ ဒေါ်သဲလေး ရဲ့ မှတ်ချက် က နေပြီး အတွေးတွေ ဆက်ပွါးရင်း ဒီ ပို့စ် ဖြစ်လာတာမို့
ချစ်ညီမသို့ လို့ နာမယ်တပ်လိုက်တာ။
တကယ်က သဲညီမ မှတ်ချက်တင်မက မြန်မာပြည် က လူတွေ တင်မက တကမ္ဘာလုံး က လူ အားလုံး ကို ကြည့်ပြီး တွေးမိတာလေးပါ။
. မြန်မာတွေ ရဲ့ အားကစားပွဲတွေမှာ အားပေးမှုက အတော်အားရစရာကောင်းပါတယ်။။
သူတို့ အားပေးတာ မြန်မာ မှ မြန်မာ မဟုတ်ဘူး။
အာရှတိုက် က လူ နဲ့ တစ်ခြား တိုက်သားများ ယှဉ်ရင် အာရှတိုက်သား ကို အားပါးတရ အားပေးတာ မေဝဲသာ တို့ပွဲ မှာ အထင်အရှားဘဲ။
. သွေးနီး ရာ ကို အားပေးတဲ့ သဘောခေါ်နိုင်မှာပေါ့။
ဒါမှမဟုတ်လဲ အုပ်စုဖွဲ့ရာမှာ အနီးဆုံး လူ ကိုဘဲ ကြည့်တတ်တဲ့/ ကြည့်လိုက်တဲ့ သဘောလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
. ပြည်တွင်းက လူ တွေ က ကိုယ့်ပြည်ထဲ ကိုယ်နေပြီး သူများ နိုင်ငံ က လူတွေ ကို အားနာစရာမလိုဘဲ ကိုယ့်လူ ကို အားပေးတာ သဘာဝ ကျပါတယ်။
. အံ့ဩမိတာ က သူများပြည်မှာ မှီတင်း နေထိုင် ပြီး အဲဒီ နိုင်ငံ က ပေး တဲ့ လစာ နဲ့ ဘဝ ကို တည်ဆောက် နေတဲ့ သူများ ကိုပါ။
. အဲဒီနိုင်ငံ ကို ကျေးဇူးရှင်လို တော့ မသတ်မှတ်ချင်နေပါလေ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီမြေပေါ်မှာ ဘဝ ရပ်တည်ခွင့်ရ နေတဲ့ လူသား တစ်ယောက် အနေနဲ့ တော့ အဲဒီ မြေ ကို မစော်ကားသင့်ဘူးလို့လဲ ဆိုချင်ပါတယ်။
မချစ်ပေမဲ့ မဖြစ်လို့ အောင့်နမ်း နေရတယ် ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကို အောက်ကို နှိမ့်ချလိုက်တာဘဲ။
. ကိုယ့်နီးရာ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဘေးမှာ ရှိသူဟာ ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးဆုံး သူပါဘဲ။
သူတို့ ကို ချစ်တတ်မှ၊ ဂရုပြုတတ်မှ၊ လေးစားတတ်မှ ကိုယ့်ဆီ ကို လဲ အဲဒီလို တူညီတဲ့ တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ကို ရမယ်။
အရင် အလုပ်မှာ ဘော့စ်က အီတလီလူမျိုးပါ။
ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲ ကန်တော့ အင်္ဂလန်အသင်း နဲ့ အီတလီအသင်း တွေ့ပါတယ်။
“ဘယ်အသင်း အားပေးမှာလဲ” ဆိုတော့ နှစ်သင်းလုံးကို အားပေးမတဲ့။
ကိုယ့်ရဲ့ ကျွေးမိခင် နဲ့ မွေးမိခင် ရှိနေရင် ဘယ်သူ့ကို ပိုချစ်သင့်တယ်/ ဘယ်သူ့ကိုတော့ ပိုမချစ်သင့်ဘူး စမ်းစစ်ရမလို ဖြစ်နေတာကို။
မျိုးချစ်စိတ် လို့ အကြောင်းပြပြီး ကိုယ့်ကို ထမင်းကျွေးနေတဲ့ အဲဒီနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုလူ တွေ ကို ရန်သူလို ပုံစံ နဲ့ ရန်လိုသူ များ ကို ဝေဖန်တာပါ။
ဒီလို ဝေဖန်လို့ ဒီမိန်းမ – မျိုးချစ်စိတ် မရှိဘူး။ အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်းပြ နေတယ်။ ကျွန်စိတ် ရှိပြီး သူများဆီ ကျွန်ခံနေလို့ ဒီလို ပြောတာ လို့ ပြောချင်လဲ ပြောကြပါ။
အင်္ဂလိပ်စာ အသုံးအနှုံး ထဲ မှာ patriotism နဲ့ chauvinism စကားလုံး နှစ်လုံး အကြောင်း စိတ်ဝင်စားလို့ လေ့လာခဲ့ဖူးတယ်။
(၁) patriotism – ˈpeɪtrɪətɪz(ə)m/
noun: patriotism – the quality of being patriotic; vigorous support for one’s country.
(၂) chauvinism – ˈʃəʊv(ɪ)nɪz(ə)m/
noun: chauvinism – exaggerated or aggressive patriotism /excessive or prejudiced support for one’s own cause, group, or sex.
. မြန်မာလို ပြန်ရင် chauvinism က အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် နဲ့ patriotism ကို မျိုးချစ်စိတ်လို့ ပြန်ရမလားဘဲ။ (မှားတယ်ထင်လဲ အမှားပြင်ပေးကြပါ)
ငါ့လူမျိုး၊ ငါ့တိုင်းပြည်၊ ငါ့ဘာသာ၊ ငါ့ယဉ်ကျေးမှု၊ ငါ့စကား၊ ငါ့ရှေးဘိုးဘွား က သူများတွေထက် သာတယ် ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ပါတယ်။
ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှု နဲ့ နာကျည်းစရာ တွေကို ရှေ့တန်းတင်တတ်ကြတယ်။
အဲဒီ စိတ်ပြင်းထန်လွန်းလာရင် သူများ တွေနဲ့ သင့်မြတ်မှု အားနည်းလာပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ထိခိုက်မှု တွေ ဖြစ်လာတတ်တဲ့ သဘောရှိတာလဲ တွေ့ရတယ်။
အဲဒီ စိတ်မှာ သူများ က ကိုယ့်အားနည်းမှု ကို ထောက်ပြဝေဖန် မှု ကို လက်မခံတာ မို့ ကိုယ့်ရဲ့ တိုးတက်မှု အတွက် အခွင့်အလမ်း တွေ ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။
အဲဒီလို ဝေဖန်ခံရရင် ငါတို့ကို စော်ကားတာလို့ ခံယူတတ်ကြတယ်။
နောက်ပြီး အဲဒီစိတ် က ကိုယ့်ရဲ့ နိုင်ငံတွင်းက လူက လွဲလို့ တစ်ခြားသူ တွေ ကို တန်းတူညီမျှ သဘောမထားတတ်ဘူး။
ကိုယ့်နိုင်ငံ/လူမျိုး ရဲ့ စံနှုံးသတ်မှတ်ချက် အပြုအမူ အကောင်းတွေ ကို ဘဲ တွေးတတ်/ ဂုဏ်ယူတတ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေ ကို ဖယ်ထားတတ်ကြတယ်။
ပိုဆိုးတာက သူများတွေ ရဲ့ စံနှုံးသတ်မှတ်ချက် အပြုအမူ အကောင်းတွေ ကို မထီလေးစား လုပ်တတ်ကြတာဘဲ။
အတိတ်က အမှားတွေ ကို ရှာထောက် ပြီး နေတတ်ကြတယ်။
. နိုင်ငံကို ချစ်တာမှာ values တွေ beliefs တွေ ကိုပါ တွဲပြီး အလေးထားပါတယ်။
ဘဝ နေရေး ကို လေးစားတဲ့ စိတ်အခံ ထားတယ်။
ချစ်ခင်တတ်မှု ကို အခြေခံတယ်။
သူများနိုင်ငံ / လူမျိုး နဲ့ ခင်မင်မှုကို အရင်းတည်ပြီး ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင် တည်ဆောက်ချင်ကြတယ်။
ကိုယ့်နိုင်ငံ ဟာလဲ တစ်ခြားကောင်းတဲ့ နိုင်ငံ တွေထဲ က တစ်ခု ဖြစ်ရမယ်လို့ တွေးပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက် အောင် ကြိုးစားကြတယ်။
ဒီအတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ရှိတဲ့ လူများအားလုံး တန်းတူညီမျှ ရေး အတွက် ကို ဆင်ခြင်တတ်ကြတယ်။
ကိုယ့်ကို ဝေဖန်ရေးလုပ်လာတာ ကို သည်းခံပြီး အဲဒီ ကနေ ပိုကောင်းတဲ့ အသစ်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ကြတယ်။
ကိုယ့်နိုင်ငံ အတွက် တာဝန်ယူ လိုစိတ်ရှိကြတယ်။ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ စဉ်းစားတတ်တယ်။
အရေးကြီး တဲ့ အချက် ကို ပွိုင့် ထုတ်ပြရရင်တော့
ကိုယ့်လူမျိုး / ကိုယ့်နိုင်ငံ ကို “ချစ်လို့” အဲဒီချစ်တဲ့ စိတ် နဲ့ အလုပ်လုပ်တာ ဖြစ်တယ်။
တစ်ခြားသူ/ တစ်ခြား နိုင်ငံ တွေ ကို “မုန်းလို့” အဲဒီ အမုန်းစိတ် နဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးကို ချစ်သလို ပုံစံသွင်းပြီး လုပ်ပြနေတာ။
အခုပြောတာ တွေ က ဟိုကဖတ် ဒီကဖတ် တွေ စုပြီး ကိုယ့်စိတ်ကူး နဲ့ ကို ရေးထားတာပါ။
ကွဲပြားချက် တွေ ရှိနိုင်သလို သဘောတူမျှချက် တွေလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။
patriotism တို့ chauvinism တို့ (nationalism လဲ ဆင်တူရိုးမှား ရှိသေး) ဆိုတာ အမည်သညာ တွေပါဘဲ။
ကိုယ့်အကျိုး လဲပါ သူများ အကျိုး ကိုလဲ မထိခိုက် စေတတ် တဲ့ စိတ်၊
ကိုယ်ချင်းစာနာ တတ်ပြီး သူများဘက် ကိုလဲ ငဲ့ညှာ တတ်တဲ့ စိတ် နဲ့
ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုး ကို ချစ်တတ်ကြ ဖို့လိုတာပါဘဲ။
ကိုယ့်ကို နှိမ်တာ မကြိုက်ရင် သူများကိုလဲ လေးစား ပြဖို့ မမေ့ဖို့ပါဘဲ။
ဒီ SEA Game နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ပြောရရင်
အမျိုးချစ်လို့ နိုင်ငံ ကို အားပေးရင်လဲ တစ်ခြားပြိုင်ပွဲ တွေ မှာလဲ အားပါးတရ သွားပြီး အားပေးကြပါ တော့လား။
ဒီ ဘောပွဲ တစ်ပွဲ ထဲ ပြိုင်တာမှ မဟုတ်။
အဲဒီ ချိန်တွေက သမ္မတကြီး(များ) ကိုယ်တိုင် နိုင်စေကြောင်းကို ဩဝါဒပြု မိန့်ကြားနေချိန် ခြင်းလုံးအဖွဲ့ ရွှေရတာ ကိုတော့ ဂုဏ်ပြုစကား ပြောရမယ်မှန်း သတိရကြရဲ့လားမသိ။
. ဘော်လုံးအသင်း ရွှေရရင် အမိုးဖွင့်ကားတွေ နဲ့ သောင်းသောင်းဖျဖျကြိုမယ်။
ကျန်တဲ့ ရွှေရပြီး သူတွေ ကျတော့ မပေါ်လွင်ကြဘူး။
ခရိုနီ အုပ်ချုပ်တဲ့ အသင်းမို့လား။
ကျန် ကစားပွဲ တွေ က စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းလို့လား။
. ရွှေပြည်ထဲ က လူတိုင်း လူတိုင်း (ကိုယ်တိုင် အပါအဝင်ပါ) ကိုယ့် ရဲ့ မျိုးချစ်စိတ် ဆိုတာ ကို စမ်းစစ်သင့်ပြီ။
. ဒီလို စာတွေ လျှောက်ရေးပြီး လေတိုက်ပွဲ ဝင်နေတာ ကို အတော်ခင်တဲ့ ဒီက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် က ဝေဖန်ဘူးတယ်။
. လေ နဲ့ချည်းဘဲ ချစ်ပြနေတာ လွယ်တာကိုးတဲ့။ ဒီလောက် နိုင်ငံချစ်လဲ ပြန်ပြီး ကိုယ်တိုင် သွားလုပ်ပါလား တဲ့။
အသာငြိမ် နေရပြီး ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်။
တကယ်တော့ ကိုယ်လဲ နိုင်ငံ ကို ဒီလောက် ပြောနေသလို မချစ်ပါဘူး လို့။
နဲနဲပါးပါး တာဝန်ကျေအောင် ဟန်လုပ် ချစ်ပြ နေသလား၊
သေချာတာ တစ်ခုကတော့ patriotism လဲ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်။
ကိုယ့်မျိုးချစ်စိတ် ကို ပြဖို့ သူတစ်ဖက်သား ကို အမုန်းပွါး နေတဲ့ chauvinism မဟုတ်တာ ကတော့ သေချာတယ်။
သူကြီးတို့ ကြောင်ကြောင်တို့ လဲ သူတို့ ကိုယ်ကျိုး တစ်စုံတစ်ခု အတွက် နိုင်ငံ ကို စိတ်ဝင်စားပြ နေတာ ကိုလဲ နိုင်ငံ ကို ချစ် တယ်လို့ မခေါ်နိုင်ပါဘူး။
သို့ပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ခါ အဲဒီ စိတ်ဝင်စားမှု ပြရာ တွေ ထဲ မှာ အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေး များ တွေ့တွေ့ နေရ တာ ကိုတော့ သတိထားကြပါ။
“ငါနဲ့ မတူ ငါ့ရန်သူ” ဆိုပြီး သူတစ်ပါး ကို အလွယ် အပြစ်ပြောတတ်တဲ့၊ ဝါးလုံးရှည် နဲ့ ရမ်းတတ်တဲ့၊ ကိုယ်လိုရာ ကိုဘဲ ဇွတ်ပုံသွင်းချင်တဲ့ စိတ် တွေ ကို ယူအက်စ် မှာ နေနေသူ များ အနေ နဲ့ မထားသင့်ပါဘူး။
. နိုင်ငံကြီးသား စိတ်မွေးကြဖို့ ကောင်းပါတယ်။
နိုင်ငံကြီးသား ဆိုရာမှာ သူများ ကိုးကွယ် ယုံကြည်ရာ ဖြစ်ဖြစ်၊ လက်ခံကျင့်သုံးမှု ဓလေ့ ယဉ်ကျေးမှု ကို ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်စိတ် နဲ့ သဘောမတွေ့ရင်တောင်မှ မပုတ်ခတ် မစော်ကား တာလဲ ပါပါတယ်။
. ဝေဖန်တာ နဲ့ အပုတ်ချ လှောင်ပြောင်တာ ကွဲပါတယ်။
“ချစ်လို့ ဖြစ်စေချင်လို့” ပြောတဲ့ စကား နဲ့” မုန်းလို့ နှစ်ဖို့” ပြောတဲ့ စကားလဲ ကွဲပါတယ်။
အဲဒါလေးကို ပြောချင်လို့ ဘက်စုံ ဝင်ရမ်းပြီး စာလာချ သွားခြင်းပါ။
ပြောစရာတွေ ..တပုံတပင်ပေမယ့်.. သိပ်လည်းမပြောချင်ပါဘူး..
ကျုပ်သာ တိုင်းပြည်ကိုမချစ်ရင်.. ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်တောင်ရှိမနေဘူးလို့ပါပဲ..။
ဘယ့်နှာ.. ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား.. ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်… အေးဆေးနေမှာပေါ့…။ အနေသာကြီး..။
ဒီလောက်အချိန်သုံးပြီး.. ယူအက်စ်နိုင်ငံရေးထဲ ..၀င်လုပ်နေရင်.. အခုဆို.. အမတ်မဟုတ်တောင်.. အမတ်အောက်ဆွဲလောက်တော့ ရပြီ..။
ဒီထဲမှာဗမာလိုအပင်ပန်းခံဝင်ရေး.. ခက်ခက်ခဲခဲပို့စ်တင်.. ကောမန့်ရေးသူတွေကိုလည်း… သိပါတယ်..။
တိုင်းပြည်မချစ်သူက.. အပင်ပန်းခံလို့တောင်.. ၀င်မဖတ်..မရေး..။
ဆိုတော့.. ဒီထဲဘာဖြစ်နေမှန်းတောင်.. သိမယ်မဟုတ်..။
ချစ်တာချည်းမို့.. ဒီမှာစိတ်တူကိုယ်တူ.. တွေ့ကြ.. မိတ်ဆွေဖြစ်ကြသပေါ့..။
ကျုပ်က.. အစွန်းရောက်ပြီးရေးတယ်ဆိုတာတော့ သေချာသဗျ..။
ဟိုဖက်အစွန်းကို ပြန်ထောင်လာဖို့က.. ဒီဖက်အစွန်းနင်းရမှာပဲ…။
ကျုပ်မှမရေးရင်လည်း.. ပြည်တွင်းက.. ထိုင်းက.. စင်္ကာပူကလူတွေက.. ရေးချင်ရက်နဲ့မရေးရဲ.. မရေးနိုင်တဲ့ဘ၀တွေကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့.. ရေးတာပါလို့..။
အခုလို.. လွတ်လပ်စွာဝေဖန်သူတွေ.. (အထူးသဖြင့် ဘာသာရေး) မှာ.. အဖမ်းခံ.. ထောင်ချခံရတိုင်း.. (သူတို့ကိုယ်စား) တဆင့်မြင့်.. ပိုပိုအစွန်းရောက်ရေးမယ်လို့.. စိတ်ကိုထားတာပဲ..။
ဤသူကိုယ်တိုင်… လွတ်လပ်စွာရေးသားမှုအတွက်.. ထိုသူများကိုယ်စား… အနာခံရေးပေးနေတယ်လို့မှတ်ပါ…။
မတော်.. ငရဲကျတယ်ဆိုလည်း.. ကျုပ်က.. ကျမှာလေ…။ ကျပါစေ..ကျစေသတည်း..။
မလတ်ရေးတဲ့ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ဆိုတာကို သဘောကျတယ်။
အသားအရောင်၊ ဘာသာ၊ လူမျိုး စသဖြင့် မတူပေမယ့် …
ကိုယ်ကလည်း အခြားသူကို မထိခိုက်စေပဲ
အခြားသူကလည်း ကိုယ့်ကို မတိုက်ခိုက်ပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်ကြရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဆီးဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘောလုံးကိုပဲ သည်းသည်းလှုပ်ဖြစ်တဲ့အထဲ ကိုယ်လည်းပါတယ်။
အားကစားတွေထဲမှာ ဘောလုံးကစားနည်းကို ပိုပြီး ဖေးဘရိတ်ဖြစ်ကြတာကြောင့်ပါသလို
ပြည်တွင်းကလူတွေအနေနဲ့ လိုက်ဖ်လွှင့်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း ပါပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါကြောင့် …… ဒါလေးတစ်ခုတော့ ခွင့်လွှတ်စေချင်တယ် မြ ရယ်။
အမှန်က သဂျီးကွန်မန့်ကို ပြန်မလို့လုပ်ရင်း ရေးချင်တာတွေကများလို့ ကျန်ခဲ့တယ်။
အတည်ပေါက်ပြောရရင် သဂျီးရဲ့စေတနာကို နားလည်လို့လည်း ဒီရွာသူားတွေ ဒီလောက်ထိရှိနေပြီး ဒီရွာအတွက် အားတက်သရော လုပ်နေကြတာပေ့ါ။
ကျနော်လည်း အရီးကို ပြောချင်တာရော တဂျီးကို ပြောချင်တာရောနဲ့ အများကြီးမို့ ပြန်လာမယ်နော်။
ဒီ ပို့(စ) နဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူးးး
သဲ တို့ ကြောင်တို့ စိတ်တွေကို နားလည်တယ်လို့
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်လို့ အဲဒီ အကြောင်းအရာတော့ မပြောတော့ပါဘူးးး
ချစ်တတ်ပုံခြင်း မတူလို့ လို့ပဲ မှတ်ပါတယ်။
ခါတလေ ကိုယ်က စိတ်ရှင်းလို့ ဒီ မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပေမဲ့ ကွယ်ရာမှာ ခေါင်းစဉ်တတ်သွားကြတဲ့ အမျိုးသား ရင့်မ ကြီးတွေကြောင့် ပြောချင်သလောက် လည်း မပြောဖြစ်တာများပါတယ်။ (အခုတလောပေါ့)
ကျနော်က ဒီ ရွာရော ဒီရွာကလူတွေရော ဒီ တဂျီးကို ရော ချစ်တာရော လေးစားတာရောကြောင့် နေဖြစ်နေတာ။ (တောက်ညင်ကပ်တဲ့ စုန်းပြူးကြီးတွေတော့ရှိတာပေါ့လေ၊ နေချင်စိတ်နဲ့စာရင်တော့ မပြောပလောက်ပါဘူး)
တဂျီးကို မကြည်တာနဲ့ ဒီ ဆိုက် ကျရှုံး သွားမှာကို ဝမ်းသာအားရ စောင့်နေသူတွေ ရှိတာကို သိပြီးတဲ့နောက် ဘာကိုမှ မအံ့ဩတော့ပါဘူးး
တဂျီးရော အရီးကို ဖေ့ဘုတ် မသုံးတာ သိပ်ကောင်းတယ်လို့ ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
တဂျီးက Thakhin Bwa လားမသိ အကောင့်ချိတယ်အေ့
ဒါမဲ့ Active မဖြစ်ဘူးလေ။
အမှန်က တဂျီးက ရွာထဲနဲ့ ဖွဘုတ် Social life ကို ခွဲသုံးနေတယ်ထင်တယ်။
အဲဒါ ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။
နာ တောင် ဖွဘုတ်က ပြသနာစိတ်အခံကို တခါတလေ ယူယူလာမိနေလို့။
( ခရိုနီ အုပ်ချုပ်တဲ့ အသင်းမို့လား။ )
ဒီစကားလုံးကိုတော့ ငြင်းပါရစေ ၊
ခရိုနီစာရင်းဝင်သူဋ္ဌေးတစ်ချို့ တစ်ခြားအားကစားအဖွဲ့ချုပ်တွေကို ကိုင်ဘူးပါတယ် ၊
ဒါပေမယ့် ဘောလုံးကျမှ ဘာလို့ ဒီလိုဖြစ်သလဲဆိုတော့
တစ်ပြည်လုံး သည်းသည်းလှုပ်အားပေးကြတဲ့ ကစားနည်းမို့ပါ ၊
၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်းမှာ ရွှေ ၈၄ ခု ရခဲ့ပေမယ့် ဘောလုံးမှာ အုပ်စုအဆင့်က မတက်သမို့ ဝမ်းနည်းပူဆွေးယူကြုံးမရဖြစ်နေကြတဲ့ ပုံရိပ်တွေ အရီး မြင်ဘူးမှာပါ ၊
နောက်တစ်ခုကတော့ ပါစင်နယ်ပေါ့ ၊
သူ့နေရာမှာ သာမန်ဘောလုံးချစ်သူတစ်ယောက်ကို တာဝန်ပေးခဲ့ရင်ကော ?
သက်တမ်းအလိုက်အသင်းတွေအတွက် ကုန်ကျစရိတ်တွေဟာ မနည်းလှပါဘူး ၊ သူဟာ ဘောလုံးအတွက် ငွေစိုက်သုံးမယ် တစ်ဘက်က ပြန်ရတာပဲ လို့ တွေးချင်လည်း တွေးပါ ၊
ဒါပေမယ့် သူ ဘောလုံးအပေါ်မှာ တကယ်စေတနာရှိတာ တိုးတက်စေချင်တာကတော့ သေချာပါတယ်အရီး ၊
သူလုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ( ခရိုနီဆိုတာ ခဏဖျောက်ပြီး ) ကြည့်ပါ ၊ တစ်ခြားခရိုနီဆိုရင်ကော
သူ့လို လူကော အချိန်ကော အားစိုက်လာမလား ?
ဒီလထဲမှာပဲ မြန်မာအသင်း ၃ သင်းဟာ ပြိုင်ပွဲတွေ တစ်ချိန်တည်းလိုလို ဝင်ခဲ့ရတာပါ ၊
ဒါကြောင့် ၃ သင်းစာအပြည့် လူစာရင်းနဲ့ အားထုတ်ခဲ့ရာမှာ ယူ – ၂၃ က အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ် ၊
အိမ်ရှင်ကို နိူင်တယ် ၊
ဗီယက်နမ်နဲ့ တွေ့တဲ့ပွဲဟာ ၁၉၉၃ မှာ ခံခဲ့ရတဲ့ ခါးသည်းတဲ့ အရှုံးကို ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ဆပ်နိူင်ခဲ့တယ် ၊
၈ နှစ်အကြာမှာ ဖိုင်နယ်ပြန်ရောက်တယ် ၊
၄၂ နှစ်ကြာ ဝေးခဲ့တဲ့ ဆီးဂိမ်းရွှေတံဆိပ် ပြန်ရလေမလားဆိုတဲ့ အိပ်မက်တွေ မက်ခွင့်ရလာတယ် ၊
ဂျူဒို ဝူရှုး စစ်တုရင် စတဲ့တစ်ချို့ကစားနည်းတွေဟာ တစ်ယောက်ကောင်း ကစားနည်းတွေပါ ၊
၁ ယောက် ၂ယောက် မဟုတ်ပဲ ကွင်းထဲဝင်တဲ့ ၁၁ ယောက်လုံး အကောင်းဆုံး ကစားနိူင်ကြမှ နိူင်ပွဲရတာဟာ ဘောလုံးပါ အရီး ၊
ဒါကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပက မြန်မာတွေ အရမ်းစိတ်ဝင်တစား အားပေးခဲ့ကြတာပါ ၊
မြန်မာဟာ ဒီနှစ်မှာ ရွှေ ၁၂ ခုပဲရတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ပရိသတ်က ဘောလုံးပဲ ၊ အသည်းစွဲကစားနည်း ဖြစ်ခဲ့တာကိုး ၊
အမေရိကန်တွေ ဘောလုံးရှုံးလို့ ဘာမှ သိပ်မဖြစ်ဘူး ၊ သူတို့အသည်းစွဲက ဘောလုံးမဟုတ် ၊
အိန္ဒိယ ပါကစ္စတန် ဘောလုံးရှုံးလို့ ဘာမှ မဖြစ် ၊
အဲ ဘရာဇီးတို့ အင်္ဂလန်တို့ စပိန်တို့ အီတလီတို့ စတဲ့နိူင်ငံတွေကတော့ ဘောလုံးဟာ ထိပ်ဆုံးကပဲ ၊ သူတို့ ဘောလုံးလိဂ်ပွဲတွေကို ကြည့်ကြည့်ပါ ၊
ပရိသတ်အားပေးမှု အများဆုံး ကစားနည်းကိုး ၊
ကျန်တဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာကိုတော့ နောက်မှ ထပ်ရေးမယ် ၊
မိုးခြစ်တာဒွေ အိုးခြစ်တာတွေ မပေါဂျင်ဗူးဗျာ… (နီဒို့နှဲ့ မတံလှို့… အဲဒါ ဆိတ်နဲ့ ပြောဒါနော်… ပဲ ဟဲ ဟဲ) စိုပီးသကာလ… ပေါဂျင်ဒါဂ….. မဲသွပ်ကြီးကို…။ ဘာဖျစ်ဖြစ်ဂျာ ထွက်ပီးသားစင်ဆွယ် ပျံမဝံသင့်ဗူး.. ဘာရယ်မှီဟုပ် မဲသွပ်ကျီး တိဗိုလ့်ပါ။
ကျန်တာတော့ ဥာဏ်မမှီ.. ခေါင်းသုံးရမှာပြင်းတာလဲပါလို့ ဆွေးနွေးတော့ဘူး
ဘောဆိုတာမိုးက.. တကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိကြ အဲလေ… အားပေးဂျတာလေ..
အိုက်တော့ ညန်မာတွေ မျိုးချစ်စိတ်ရှိတာမဟုတ်ပဲ.. ဘောချစ်စိတ်ရှိတယ်လို့ပဲ ထားလိုက်ပါတော့ အရီးရယ်.. အားလုံး အဆင်ပြေသွားအောင် ကြားချလိုက်ကြရအောင် :hee:
ခုလို ဖွင့်ချပြပါမှလည်း အစွန်းရောက်သူများ သတိမူစရာ ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ မနောတို့တော့ သိသေးပေါင် ကရေးပဲ ရှိတေးလို့လား မသိ…
.ပြသနာကြီးတစ်ခုကို အမြစ်က ရှင်းရမှာလေ။ ဘေးကနေပတ်ဝိုင်းနေလို့ ဘယ်တော့မှ ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။ .အဲဒီမှာ အိုဝဲရဲ့ ဒသနလာပြီ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိရှိသမျှ တိုင်းပြည်တွေ အကုန်လုံးအတွက် သီဝရီတစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် ဒီဆိုက်ထဲမှာ ကျမ ပြောပြီးပါပြီ။ အဲဒီသီဝရီကတော့ – တိုင်းပြည်တွင်းက လူတွေကို ဘရိန်းမ၀ပ်ဘဲ အဲဒီတိုင်းပြည်ကို အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်လို့ မရပါဘူး – ။ brainwash ဆိုတဲ့စကားလုံးက ဂျော့အိုဝဲ တီထွင်ခဲ့တဲ့ စကားလုံးပါ။
.အခု မြန်မာပြည်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်လို့ရနေခဲ့တာ တိုင်းပြည်တွင်းက လူတွေ ဘရိန်း အ၀ပ်ခံထားရလို့ပါ။ မြောက်ကိုရီးယားလို propaganda ပိုင်းမှာလည်း ဒီမှာ ဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒါနဲ့တောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အုပ်ချုပ် နိုင်ခဲ့တာ ဘာလို့လဲ။ ဘုရား … ဘုရား… ကျွန်မစာအုပ် မိဘမဲ့တိုင်းပြည် ခုထိ မထွက်နိုင်သေးဘူး။ ဒါအရေးကြီးတယ်။ မိဘမဲ့တိုင်းပြည်ကို ၁၉၈၄ နဲ့တွဲဖတ်နိုင်ရင် ဒီတိုင်းပြည်ကိစ္စ အဖြေပေါ်ပြီ။
.ကျွန်မပြောပါရစေ။ ခုနေ ဘယ်သူတက်တက်၊ မကြာခင်မှာ အာဏာရှင်စနစ်ပဲ ပြန်ဖြစ်မှာ။ လူတွေကို လွှမ်းမိုးနေတဲ့ အတွေးအခေါ် ။ အဲဒါက အ၀ါတွေဆီက လာတာ။ အ၀ါကနေ fanatical patriarchy (အစွန်းရောက် ဖိုဝါဒ) ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ အဲဒီကနေ patriotism ကို ကူးတယ်။ အဲဒီကနေ nationalism ဖြစ်တယ်။ အဲဒါ ကျမ မြင်တဲ့ပုံစံပါ။
အဲဒါဖတ်ပြီး ရီချင်တာလေး ပြောပြအုံးမယ်။
အလုပ်မှာ ကောင်လေးက ၀န်ထမ်းဆိုတော့ ငွေသိပ်မရှာနိုင်ဘူး။
သူယူထားတဲ့ကောင်မလေး ကွမ်းယာဆိုင်ဖွင့်ပြီး ဈေးရောင်းကျွေးတယ် ဆိုပါတော့။
ဒါပေမယ့် ကောင်လေးက မေ့မေ့လျော့လျော့ပေါ့ပေါ့ဆဆ နေတတ်တယ်။
မကြာခဏ ထီးပျောက်လိုက်၊ ဖုံးပျောက်လိုက်နဲ့ပေ့ါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က လစာငွေကျပျောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ သူ့မိန်းမစိတ်တိုပြီး တုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ အလုပ်ထဲကို လိုက်လာတယ်။
ကောင်လေးက မျက်နှာခြင်းဆိုင်မတွေ့အောင် ရှောင်နေတာနဲ့ ဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မဖြစ်လိုက်ဘူး။
အလုပ်ထဲက လူတွေက အကြောင်းသိတွေဆိုတော့ ကောင်လေးကို စကြ နောက်ကြတာပေ့ါ။
အဲဒီတော့ ကောင်လေးက ဘာပြောတယ် မှတ်သလဲ။
ပြဿနာ မဖြစ်ချင်လို့ ရှောင်နေတာ တဲ့လေ။
အဲဒါကြားတော့ ရီချင်မိပြီး နင်က ဘယ်တုန်းက အိမ်ဦးနတ်ဖြစ်သွားတာ လဲ လို့ မေးတော့…
ယောင်္ကျားဆိုတာ အိမ်ဦးနတ်ပဲလေ တဲ့။
ဟိုက ရှာလည်း ကျွေးရသေး၊ နင့်လည်း ပူဇော်ပသရအုံးမှာလားလို့ ပြောမိတယ်။
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲယှဉ်ပြိုင်ရန် မြန်မာယူ-၂၃ အသင်းကို ပစ်စလက်ခတ်
တာဝန်ပေးခြင်းဟု အုပ်ချုပ်သူ ဦးသန်းတိုးအောင် ဝေဖန်
၂၈ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းဘောလုံး ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ငွေတံဆိပ်ဆု ဆွတ်ခူးခဲ့သော မြန်မာယူ-၂၃ အသင်းသည် ယနေ့ ညနေ ၃နာရီ အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက် ရှိလာခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဘောလုံးအသင်း၏အောင်မြင်မှု သည် နိုင်ငံစီးပွားရေးနှင့် တိုက်ရိုက်တိုက်ဆိုင်ကြောင်းနှင့် လက်ရှိ မြန်မာယူ-၂၃ အသင်းအား ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲစေလွှတ်ခြင်းမှာ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌဦးဇော်ဇော်မှလွဲ၍ ပစ်စလက်ခပ် တာဝန်ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာယူ-၂၃အသင်း အုပ်ချုပ်သူ ဦးသန်းတိုးအောင်က ဝေဖန်ပြောကြား သွားခဲ့သည်။
ငွေတံဆိပ်ဆုရှင် မြန်မာယူ-၂၃ အသင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာလက်ရွေးစင် ကစားသမားဟောင်း၊ လက်ရှိ မြန်မာယူ-၂၃ အသင်းအုပ်ချုပ်သူ ဦးသန်းတိုးအောင်က ပြောကြားရာ “ ကျွန်တော်တို့ အသင်းဟာ ထိုင်းကို အနိုင်ရရှိဖို့ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကစားသမားတွေဟာ သူတို့မှာရှိတဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ကစားအားကို ရှိတာထက်ပိုပြီး ထုတ်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါက ပြောရမယ်ဆိုရင် အဓိက ကတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးပေါ့။ (National Economy) လို့ခေါ်တဲ့ တိုင်းပြည်စီးပွား ရေးက တိုက်ရိုက် တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ထိုင်းလိုသာ ကျွန်တော်တို့ ချမ်းသာမယ်ဆိုရင် ၁၀ဂိုးလောက် ပြန်သွင်းပလိုက်မယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် မြန်မာယူ-၂၃ အသင်းအုပ်ချုပ်နည်းပြ အဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်လောင်းပြောကြားရာ “ ကျွန်တော်တို့ ပြိုင်ပွဲပြီးသွားပါပြီ။ Game Over ဖြစ်သွားပြီ။ ကျွန်တော်နဲ့ ကိုကြည် ဒီရာထူးက နှုတ်ထွက်မှာပါ။ နောက်ပြိုင်ပွဲအတွက် ထပ်ပြီး ကမ်းလှမ်းလာရင် စဉ်းစားသွားမယ်။ အခု ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲလို တာဝန်ပေးရင် တော့မစဉ်စားတော့ပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ကို ပစ်စလက်ခတ် တာဝန်ပေးတယ်လို့ထင်တယ်။ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်ကလွဲရင်ပေါ့”ဟု ဦးသန်းတိုးအောင်က သုံးသတ်ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
Credit – http://www.planet.com.mm/detail/28013/Sports
Yes .. that’saword I wanted to use. (nationalism)
အမှန်တော့ ပြုံး ရေ။
တို့လဲ confused ဖြစ်နေတာ အဲဒီ nationalism နဲ့ chauvinism ဘဲ။
ဒါပေမဲ့ မသေချာလို့ nationalism ဆိုတာ ကို ထုတ်မသုံးတာ။
George Orwell ရဲ့ စကား “nationalism is ‘the worst enemy of peace’.” ကို လဲ ကိုးကားဖို့ ဟာ ကိုယ်က မသေချာဘဲ ထည့် မသုံးချင်လို့ သေချာတဲ့ chauvinismကို သုံးလိုက်တာ။
ဒီပို့စ် မှာ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ နစ်နာစေ မပါပါဘူး။
လက်ရှိ မြန်မာပြည်ထဲ / မြန်မာပြည်ပြင် မှာ အစွန်းရောက်မျိုးချစ်တွေ အတော်လေးများလာတာတွေ့လို့ အဲဒီ ကိစ္စကို ဝေဖန်တဲ့ သဘောပါ။
ညီမ သဲ နားလည်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဟို နှစ်ယောက်က တော့ အရေထူပြီး မို့ မပြောတော့ဘူး။
ကိုမျိုး ပြောတာ၊ မမ ပြောတာ၊ ဇီပြောတာ တွေ အတွက် ပြန်လာပါ့မယ်။
. ပြုံး ရဲ့ မိဘမဲ့တိုင်းပြည် ကို ဖတ်ချင်လွန်းလို့ ဟာ မထွက်သေးတာပေါ့။
အနစ်နာခံ”သူကြီး” ရဲ့ အစွန်းရောက်ဆိုတာ ဝန်ခံ စကားကြောင့် စိမ်းလိုက်ပါတယ်။
စိမ်းလိုက်လို့.. လူစီတုံး..နောက်ဂျွမ်းထိုး.. စင်ပေါ်တက်အော်လိုက်ဦးမယ်..။
၁။ က ကျုပ်မျာပါစင်နယ်ဖဘအကောင့်ရှိပေမယ့်.. ဘာမှမရေး..။ အင်း..စိတ်ကူးပေါက်ရင်တော့.. ၂လ လောက်တခါရေးမိသလားပဲ..။ အဲဒီ Thakhin Bwor ဆိုတာကလည်း.. ဟိုတနေ့ကမှ.. MG အကောင့်အူကြောင်ကြောင်နဲ့ဝင်မရတော့တာမို့.. Page ပြောင်းသွားသမို့.. ၀င်လို့ရအောင်.. Admin တခုလိုတယ်ဆိုတာမို့.. ကောက်လုပ်လိုက်တာပါပဲ..။ Friends တွေပျောက်ကုန်မျာစိုးသမို့..မသုံးတော့တဲ့ MG (Mandalay Gazette) ကို နာမယ်ပြောင်းလိုက်တာ..။
၂။ မကျေနပ်တာများရှိ.. ဆဲချင်သပဆိုရင်.. ရွာထဲကြိုက်သလောက်လာဆဲနိုင်သပ..။
ဖဘမှာ သွားရေးနေရင်တော့ ကျုပ်လည်းမသိ..။ စိတ်ချမ်းသာ၏..။
အဲ.. ဒီမှာဆဲခံရလည်း.. စိတ်ချမ်းသာတာပါပဲ..။ ဆဲဖေါ်ရတဲ့သူရှိသကိုး… ဆိုပြီးတော့..။
၃။ ကျုပ်ရေးတာကြောင့်.. ရွာသူားတဦးတယောက်.. (ပါစင်နယ်)ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ထိခိုက်နစ်နာသွားတယ်ဆိုပြောပါလေ..။ တောင်းပန်ပါ့မယ်..။ ဖြေရှင်းပေးပါ့မယ်..။
ကျနော် မျိုးချစ်တစ်ယောက်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်
အခုတော့ ကိုယ့်အတွက်ကြောင့်ချစ်တာလား နိုင်ငံအတွက်ချစ်တာလား ဆိုတာ ခွဲခြားသိသွားပါပြီ
မျိုးချစ်စိတ်/နိုင်ငံချစ်စိတ် ဆိုတာ ယေဘူယျတော့
– ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ကိုယ့် နေချင်မယ်
– ကိုယ့်လူမျိုးကို ချစ်မယ်။
– နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးကို အကောင်းထင်တယ်။
– ရွှေထီးဆောင်းရတာကို တသသပြောမယ်
– မကောင်းပြောရင် မကြိုက်ဘူး
ဒါက လူတိုင်းမှာ အနည်းနဲ့ အများရှိကြတာပေါ့။
နောက်တော့ အပြင်ထွက်ဖူး ရောက်ဖူးတဲ့ သူတွေကျ ၂ ပိုင်းလောက်ကွဲသွားမလားမသိ။
နှိုင်းယှဉ်ဖူးတော့ ယှဉ်စရာ ရသွားတော့….
– ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို သူများနိုင်ငံလိုဖြစ်စေချင်
– သူများလူမျိုးတွေ အားကျစရာဖြစ်တော့ ကိုယ့်လူမျိုးလည်း ဒီလိုဖြစ်စေချင်
ဘာမဆို နှိုင်းမိ အားမရဖြစ်မိပြီး မွေးစားနိုင်ငံကို မနာလိုလည်း ဖြစ်မိတာတွေ ရှိတာပေါ့လေ။
နောက်တစ်မျိုးကျတော့ မွေးစားနိုင်ငံက သာမှန်းသိတော့ မြန်မာပြည် ပြန်စောင်းမကြည့် ကျောခိုင်းသွားတဲ့သူမျိုးတွေလည်း ရှိတာပေါ့။
(ခါတလေများ ကိုယ်က စေတနာ ဒေါသောပြောမိလို့ ကိုယ့်ကို မျိုးမချစ်ဘူး အပြောခံရတိုင်း အဲလို ကျောခိုင်းသွားတဲ့ သူတွေနဲ့သာ တန်တယ်လို့ တွေးမိတယ်။)
သူများ မိသားစုက တော်တဲ့ မိဘတွေ မြင်တိုင်း ပထွေးအရက်သမားနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့် မောင်နှမတွေကို သတိရသလိုပါပဲ။
အဲဒီ စိတ်ကို တဂျီး ဆီမှာ မြင်ရလို့ ဒီမှာ မြဲတာပါ။
မောင်ဂီ အဲဒီလို စ ပြောဖူးတုန်းက ကျနော်အမြင်က ဝါးတားတားဖြစ်နေတုန်းရှိသေးး။
ကြာတော့ ရေးတဲ့စာတို့ ပြောတဲ့ အပြောတို့ထဲက ဘယ်သူဟာ ဘယ်လို အမျိုးအစားလည်း သိရပါတယ်။
တဂျီးလည်း ပြောဖူးပါတယ်။ ဒီ စကားကို။
ခုထိ သဘောမပေါက်မသိသေးသူတွေ အတွက်တော့ ကျနော်မလွမ်းလောက်တော့တာမို့ မလွမ်းတော့ပါဘူးး
Relationship တစ်ခုမှာ အဖြစ်အပျက်တိုင်းဟာ (Filter) ဇကာတွေပါပဲ။
စစ်ကျန်ခဲ့သူ .. ကျကျန်ခဲ့သူ …. တူရာ စု သွားမှာမို့ပါ။
ခု နိုင်ငံရေးလည်း ဒီလိုပါပဲလေ။
ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့ လေဒီ ကိုတော့ သနားတာရော၊ လေးစားတာရော ပိုပိုလာပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးဟာလည်း Survive ဖြစ်ဖို့ မွေးလာတဲ့ လူမျိုးလို့ ပဲ ယူဆချက်က ပိုပိုခိုင်မာလာတယ်။
၂၀၁၅ အဖြေထွက်တဲ့အထိ Survive ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ် အရီးး
patriotic ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မြန်မာ့ကျောင်း သီချင်းမှာ ကြားဖူးတယ်…
တို့အမျိုးဇာနည် ပီပါပေသည်.. Our youths are truly patriotic ဆိုပြီး ကြားဖူးတာ..
ဘောလုံးပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ အိမ်မှာ ပြည်တွင်းက အလကားလွှင့်တဲ့လိုင်းတွေပဲ ဖွင့်လို့ရတယ်.. မြန်မာ့အသံကလည်း ဘောလုံးပွဲတစ်ခုပဲ လွှင့်တယ်လို့ ထင်တာပဲ.. လက်ရွေးစင်အသင်း ခြေစစ်ပွဲတောင် မလွှင့်ဘူးထင်တယ်…
ဆိုတော့.. သူများကို လွှဲချရရင် ပြည်တွင်းမီဒီယာနှင့်သာ ဆိုင်ပါကြောင်း..
.အရီးလတ်တို့ ဘာအကြောင်းအရာရေးရေး ဂိတ်ဆုံးက နိုင်ငံရေးမှာ။
.သဂျီးလည်း နိုင်ငံရေးအကြောင်း ဘယ်လောက်ရေးရေး ဂိတ်ဆုံးက ဘာသာရေးမှာ။
.နောက်ထပ် ချာလပတ်လည်စရာ တစ်ခု မျှစ်ကြော် ထပ်ပြီးတွေ့ရှိထားသေးတယ် ဟီး။ အဲဒါကတော့ ပညာရေးက ဘာသာရေးကို မလွှမ်းမိုးဘူး။ အဲဒါကြီးကို ရှင်းအောင် ဘယ်လိုပြောရမလဲ မသိဘူး။ လူတစ်ယောက်ဟာ ပညာရေး ဘယ်လောက်ပဲမြင့်မြင့် ငယ်တုန်းက ဘာသာရေးအသိ ရိုက်သွင်းခဲ့တာခံရဖူးရင် သူသင်ထားတဲ့ပညာရေးက အဲဒီ ဘာသာရေးကို မကျော်ဘူး။ ပညာတတ်လူတွေ အများကြီးဟာ ဘာသာရေးသမားတွေ ရှိသင့်တာထက်ပိုတယ်။ တခြားဘာသာတွေကျတော့ အစွန်းရောက်လို့ ပြောလို့ရတယ်ရှင့်။ မွတ်တွေကိုပေါ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာကျတော့ အစွန်းရောက်လို့ ပြောလို့မရဘူး။ သူက အားပိုပြင်းတဲ့ အပျော့ဆွဲ။ ဒါကြောင့် အပျော့ဆွဲဘာသာရေး လို့ပဲ ပြောတော့မယ်။
.NLD ထဲမှာ ဘာသာရေးသမားတွေရှိတယ်။ အစွန်းရောက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ အပျော့ဆွဲတွေ။
.မျှစ်စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်းပြောချလိုက်ရင် တစ်ရွာလုံး ၀ိုင်းဆဲကြမှာစိုးလို့ နည်းနည်းလေးပဲ ပြောတော့မယ်၊ ခန်တီတရားလက်ကိုင်ထားကြပါ။
.လူတစ်ယောက် ဆင်းရဲမွဲတေရင် အတိတ်ကံ မကောင်းလို့လား။ အစိုးရ သောက်သုံးမကျလို့လား။
.လူတစ်ယောက် အချိန်မတိုင်ခင်သေရင် သတ္တ၀ါတစ်ခု ကံတစ်ခုလား။ အစိုးရ သောက်သုံးမကျလို့လား။
.ဘာသာရေးသမားတွေနဲ့ ပတ်သက်ကြည့်။ သူတို့စိတ်ထဲ ကံ အဓိကပဲ။ လုပ်လိုက်ရင် သူ့ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ်ကုသိုလ်ရရေး။ သူတို့က မေတ္တာတွေပေးတယ်။ အကောင်အထည်မှ မမြင်ရတာကို။ အဲဒါတွေ ထမင်းမှ မဖြစ်တာ။ သူတို့ စီးပွားရေးကျတော့ အထိမခံ။ အဲဒီလို ဘာသာရေးသမားတွေ အုပ်ချုပ်မယ်ဆို ဒီနိုင်ငံ ဘာဖြစ်သွားမလဲ။
.တိုင်းပြည်ပြောင်းချင်ရင် ပညာရေးပြင်ချလိုက်။ နှစ် ၂၀ မကြာစေရဘူး။ ဓမ္မစကူးလ်တွေ ပိတ်ပစ်လိုက်။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွေမှာတောင် ဘာသာရေး အပြင်းအထန်လုပ်နေကြတာ သိလား။ ဒါကိုပဲ ဟုတ်လှပြီထင်နေတယ်။ ဘာသာရေးက ခေါင်းညိတ်ပညာရေးကို ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်။ ပညာရေးအသုံးစရိတ်တွေ တိုးပေးလည်း အဓိက အကျဆုံး သင်ရိုးမှာ -မယ်ပုပြောသလို ဦးနှောက်ညာခြမ်း သုံးတာ မပါ- အဓိကကျတာချည်းကို အသာ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေပြီးတော့ ။
.အမေစုကို သဂျီးက သမ္မတ မဖြစ်စေချင်။ အရီးက ဖြစ်စေချင်။ ဒါကလည်း အကြီးအကျယ် သဘောထားကွဲလွဲမှုကြီး။ ကျမအထင်မှာ အမေစု ရှိနေသေးသရွေ့ တိုင်းပြည် မပျက်နိုင်ဘူး။ အမေစု အတွက်လည်း သမ္မတ မဖြစ်တာ ပိုကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမကတော့ ဘယ်တုန်းကမှ ကိုယ့်စိတ်ရဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး မလုပ်တတ်လို့ အမေစုပဲ မဲထည့်မှာ။ အဲဒါကတော့ ကျမရဲ့ ဂိတ်ဆုံး ရှင့်။
အမေစုကို သဂျီးက သမ္မတ မဖြစ်စေချင်။
ဒေါ်စုက နိုင်ဂျံဂါးအနေကြာပြီး.. မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာလေ့လာဖူး..။ အိန္ဒိယမှာကျောင်းတက်ခဲ့တာမို့.. ဟိန္ဒူသဘောတွေနားလည်သူလို့..သိထားသမို့.. သူကသာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကျိန်စာကို သိပြီး.. တတ်နိုင်သလောက်လွတ်အောင်လုပ်သွားမယ့်သူလို့ သေချာနေမိလို့..တွန်းနေတာဗျ..။
ဟတ်..ဟတ်.. ဟတ်.. ချိုး…။
မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတဲ့ မြားကြီးနဲ့ ထောက်ကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီးရောဆိုတဲ့ ဒေါ်လေးမြပြောသလို chauvinismတွေ အများကြီးရှိနေတာ တွေ့ရတယ်။ ဒေါ်လေးစကားအရ ဒီငွေရတဲ့ ဘောသမားတွေထက် ရွှေရခဲ့တဲ့ အားကစားသမားတွေကို ပိုပြီး ချီးမြောက်သင့်ဆိုတာကို ပြောရရင် ဘောလုံးဆိုတာ well known sport တစ်ခုလဲဖြစ် မီဒီယာ အများစုရဲ အသားပေးဖေါ်ပြခြင်းခံရတဲ့ ကစားနည်းလဲဖြစ်တာမို့ လူတွေက ဒီဘောလုံးသမားတွေကိုပဲ အာရုံစိုက်မိတာလို့မြင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်ကလဲ ပြည်သူ့အကြိုက်ကို ဟန်ဆောင်လိုက်လျောတတ်တဲ့ အကျင့်ကိုလဲ မေ့ထားလို့မရပါဘူး။
ဆိုတော့ကား… ကျွန်တော့အမြင်တော့ ကိုယ့်အမျိုးကိုချစ်တယ်ကွလို့ပြောနေရုံနဲ့မပြီးနိုင်ပါဘူး။ အမျိုးကိုချစ်ရင် အမျိုးကောင်းစားရေးလုပ်ရပါမယ်။ အမျိုးအတွက် ဆုတ်ယုတ်မယ့် ရှုံ့ချခံရမယ့် အလုပ်တွေကို ရှောင်ရပါမယ်။ လူအားလုံး ကိုယ့်အမျိုးကိုယ်ချစ်ကျသူချည်ပါ။ ဒါမဲ့ အကျိုးရှိရှိချစ်တဲ့သူနဲ့ အာနဲ့ချစ်တဲ့သူတော့ ကွာပါလိမ့်မယ်။
ဒါနဲ့ ဒေါ်လေးမြရေ့။ ကျွန်တော့လဲ မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ပုဒ်လောက်ရေးဦးမယ် ဗျို့
အဟိ သူများပြောမှအပြေးအလွှားလာကြည့်ရတယ် နောက်ကျသွားတာတောင်းပန်ပါတယ်အရီးရယ်။ ကိုယ်လဲဒီလောက်အမျိုးချစ်တဲ့ထဲတော့ပါပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တဖက်အစွန်းသိပ်ရောက်လွန်းသူတွေတွေ့ရင် ကိုယ်ကဟိုဖက်အစွန်းကနေ အရွဲ့တိုက်နေချင်တတ်တဲ့အကျင့်ကပြင်မြဘူးရယ်။ ကားမောင်းသွားရင်တောင် ရှေ့ကကားပိတ်နေလို့ကားခဏရပ်တာကိုနောက်ကကားကဟွန်းတီးပီးသွားခိုင်းရင် ဘရိတ်နင်းပီးလုံးဝမရွေ့ပဲရပ်ပစ်တတ်တဲ့ညစ်ကျယ်ကျယ်ပါ။ ဒါ့ကြောင့်လဲဟိုနေ့ကမန့်လိုက်တာ။ ခက်တာကကျန်တဲ့အားကစားထက်ဘောလုံးကိုမှမြန်မာတွေ ဘာလို့သည်းသည်းမည်းမည်းဖြစ်နေလဲမသိပါဘူး အရီးရယ် အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီဖြစ်ဖူးတဲ့ထဲက ကျန်ကောင်းကျန်ရာအမွေလေးတခုများလား ဟိုနေ့ကတောင်တွေးနေမိပါတယ်။ ကိုဒေလဲပြေးခုန်ပစ်နဲ့ဘောလုံးကလွဲလို့တခြားဟာကိုစိတ်ထဲသိပ်မရှိ။ ပြေးခုန်ပစ်ကရွှေမရတာကြာတော့ ဘောလုံးပဲမဲနေမိတာ အားနာစရာကောင်းမှန်းတော့သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ခက်တာက တခြားဟာတွေကိုလဲအစိုးရကိုယ်နှိုက်က ဟိုက်လိုက်မလုပ်ဘူး။ သူတို့ကလဲသူတို့မဲရရေးပေါ်ပင်လိုက်နေရရှာတာဆိုတော့ ကျန်တဲ့အားကစားအဖွဲ့ဘယ်သူတွေသွားမှန်းတောင်ပြည်တွင်းကမသိရ။ အင်းပြောရရင်တော့ အစိုးရမကောင်းတာကနေစတာပါပဲအရီးရယ်
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မွသဲလေး။ ပြန်တိုင်း မဖြစ်မနေ တွေ့မဲ့ ညီမ တစ်ယောက်တိုးပြီဟေ့။ :-))
ပို့စ်ထဲ ဝင်အားပေးသူများ အားလုံး ကျေးဇူးကြီးပါ။
. မောင်ကာကြီးရေ – ဖတ်ဖို့မျှော်နေပြီ။
. ဒေါ်လေး က မှာ အားလုံး ဆုရရ/မရရ အားပေးစေလိုလို့ ပြောတာပါ။
. ဘော်လုံး ရွှေရဖို့ဂရုစိုက်တာလား၊ နိုင်ငံအတွက် ရွှေများများရဖို့လား တို့ တွေ မကွဲသလို ဖြစ်ကုန်လို့။
. ဘော်လုံးလဲပြီး ရော လူတွေ စိတ်ဝင်စားမှု နဲသွားတာတော့ အသေအချာဘဲ။
ဒီတော့ ဒေါ်ဝါးလေး ပြောသလို မျိုးချစ်စိတ် ထက် ဘောချစ်စိတ် လို့ ဘဲ သတ်မှတ်လိုက် အေးရော။
. ပွဲသိမ်း တော်သကွာ ဒေါ်ဝါးလေး။ lol:-))))
.တခြားအားကစားနည်းတွေ ရွှေဘယ်လောက်ရရ အရေးမကြီးဘူး၊ အမလတ်ရေ။ အဓိက က ဘောလုံး။ ဒါကို ဘာဖြစ်လို့ လူကြိုက်များသလဲဆိုတော့ လူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာ တိုက်တာ ခိုက်တာကို ၀ါသနာပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်စွဲပြီး မတိုက်ရတဲ့အခါ ဘောလုံးကန်ရင်း တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ကို အာသာဖြေကြရတယ်။ မြန်မာလူမျိုး သာဆိုးတော့မပေါ့။ ဘောလုံးအားကစားနည်းရဲ့ စွဲမက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးနဲ့ ချစ်စရာအကောင်းဆုံးက အဲဒီ တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ကိစ္စပါပဲ။
ကိုယ်ကတော့ တပိုင်တနိုင်ပဲ ။မျိုးလည်း မချစ်နိုင်ဘူး၊၊ဘောလည်းမချစ်တတ်ဘူး။မြို့ပဲချစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကို ချစ်တယ်။နိုင်သူကိုလည်း ချစ်တယ်။ရှုံးသူကိုလည်း သနားတယ်။